QM oo Soomaaliya ka dalbatay inay deg deg u joojiso xukunnada dilka ah | dayniiile.com
Home WARKII QM oo Soomaaliya ka dalbatay inay deg deg u joojiso xukunnada dilka...
“Xuquuqda xoriyatul qawlka iyo ra’yigu waxay lama huraan u tahay dimoqraadiyad kasta oo shaqaynaysa. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira walaac laga qabo xarigga aan loo meel dayin iyo xarigga saxafiyiinta ay ku hayaan ciidamada ammaanka ee dalka oo dhan,” ayey tiri.
“Waxaan jeclaan lahaa inaan ku celiyo muhiimadda ay leedahay in la ixtiraamo xaqa xorriyadda hadalka iyo ra’yiga. Waxaan ku talinayaa in shuruucda iyo siyaasadaha, madmadowgooda loo adeegsaday in dembi looga dhigo shaqadooda sharciga ah, in dib loo eego iyadoo la eegayo in la keeno nuxurka iyo fulinta si waafaqsan mabda’a sharciga iyo halbeegyada kale ee xuquuqul insaanka caalamiga ah.”
Previous articleRa’isul Wasaare Imran Khan oo ka badbaaday mooshin xil ka-qaadis ah
Next articleWaxaa qaatay Shahaadada Xildhibaanimo ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xildhibaanada hoos ku qoran
Madaxweynaha Xasan Sheekh oo gaaray Magaalada Dhuusamareeb
In Yemen, guns are mostly silent as groups adhere to a...